Otu esi achọpụta ma ọ ga-ekwe omume ịgba ọsọ Unity 3D na kọmputa gị | Site na Linux
Ọ bụrụ Dị n'otu 3D anaghị arụ ọrụ nke ọma na kọmputa gị, enwere ụzọ chọpụta ọ bụrụ na nke a bụ n'ihi iji ndị ọkwọ ụgbọala na-ezighị ezi, a ahụhụ ma ọ bụ nanị n'ihi Unity 3D akwadoghi akụrụngwa gị.
Iji chọpụta ma Unity 3D na-akwado ngwaike kọmputa gị, m mepere ọnụ wee pịa:
Ọ bụrụ na ị nweta "ee" na nzaghachi na isi "Unity 3D na-akwado", kọmputa gị ga-enwe ike ịgba ọsọ Unity 3D (iji Compiz) na-enweghị nsogbu. O kwere omume na ị nwekwara ike ịgba ọsọ GNOME Shell, n'ihi na ha nwere ihe ndị yiri ya.
Iwu a na-arụ ọrụ naanị na Ubuntu 11.04 na 11.10. Ọ bụrụ n'ijighị otu n'ime abụọ ndị a, echefula na ị nwere ike ịnweta ya ndepụta ngwaike enwetara site na Ubuntu iji hu ma komputa gi gha agba oso Unity 3D.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Otu esi achọpụta ma ọ ga-ekwe omume ịgba ọsọ Unity 3D na kọmputa gị
M wụnye ubuntu 11.04 na laptọọpụ m na mbụ enweghị m ike iji ịdị n'otu; mgbe post a meghere ọnụ m wee nweta nke a:
OpenGL onye na-ere ahia: NVIDIA Corporation
OpenGL na-enye eriri: GeForce FX Go5200 / AGP / SSE2
OpenGL ụdị eriri: 2.1.2 NVIDIA 173.14.30
Ọ bụghị software sụgharịrị: ee
Ọ bụghị blacklisted: mba
GLX fbconfig: ee
GLX udidi si pixmap: ee
GL npot ma ọ bụ ederede ederede: ee
Mmemme GL vertex: ee
Mmemme GL nke iberibe: ee
GL vertex buffer object: ee
GL framebuffer ihe: ee
GL version bụ 1.4 +: ee
Dị n'otu kwadoro: mba
Amalitere m inyocha "abụghị ndị ojii: e" m wee chọpụta na site na ịwụnye "sudo apt-get install Unity-2d" na ọnụ m nwere ike ịgbalite desktọọpụ Unity, yana ndị enyi enwere m ya, ana m ahazi ya na m chọọ ma ọ dị mma. Ekele si Panama
Zaghachi Alonso C Herrera F
laptọọpụ m bụ toshiba satellite sitere na 2003 ma na-akwagide Unity2D n'ụzọ zuru oke
Hahahaha, Agaghị m enwe ike ịkwụsị ịchị ndị mmadụ ọchị. Iesmụnwoke, ndị na-adịghị ahụ ịdị n'otu na-ejighị ya, ndị na-enweghị mmasị na Gnome3 nke na-adịghị eji ya. Nke a bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ.
Ọzọkwa ọ bụrụ n ’ịchọrọ Gnome Legacy nke ukwuu (ee, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ na-afụ ụfụ, na-ebe ákwá, na-agbapụ, na-ata ahụhụ na imeju ha na-agba ọkụ, ọ bụ" LEGACY ") wụnye Gnome3 ma ị ga-enwe nhọrọ nke" Gnome Classic "(ndị ahụ na-eri ahụ achọghị ịgwa gị oge ochie, nke ochie na mmejọ).
Zaghachi Eduard Lucena
Ọ bụ naanị m na-achọpụta na enwere m nsogbu na enwere desktọọpụ ndabara nke chọrọ kọmputa dị ike iji? Karịsịa ịtụle nsogbu ndị dị na listi iji nweta ndị ọkwọ vidiyo.
Ọ bụghị naanị gị Mana ọ bụrụ na echiche ahụ bụ imepụta gburugburu ebe obibi dabere na kọmpụta dị ike nke oge a mana ọ ga-aga n'ihu na-etolite na-enweghị ịba ụba na ojiji nke ihe onwunwe, anaghị m ahụ ya dị njọ. Ma ọ bụrụ na echiche ahụ dị ka MS na-eme na mgbe ọ bụla ọ wepụtara mmemme ọhụrụ, OS, ma ọ bụ melite ọ chọrọ akụ karịa nke gara aga, nke ahụ bụ ma m hụ na ọ dị njọ.
Zaghachi Daniel Misael Soster
Ma ebe obibi ndabara ga-adị, n'echiche nke m, ìhè na enweghị mmetụta ndị ọzọ. Mgbe ahụ ọ bụrụ na ịchọrọ (ma nwee ike) tinye puku na otu "swiiti anya", mee ya.
Chọpụta, ọ bụ Unitydị n'Otu 2D. Nnwale ahụ na-arụ ọrụ iji hụ ma ị nwere ike iji Unity 3D. Agbanyeghị, nkọwa gị bara ezigbo uru.
Ekwughị m Gnome 2. N'ezie, maka ugbu a ọ bụ naanị ihe eji eme ihe. Ọkpụkpụ gnome na ịdị n'otu bụ otu ihe na atụmatụ ha. Windows 7 na-eme nke ọma na desktọọpụ "kpochapụwo" (ogwe aka ya na ndepụta windo, menu mmalite). M ga-ekwu karia nke ozo, kedu ka esi ere ihe dika Unity ka onye jiri Windows XP kemgbe 7?
Xfce 4.8 bụ onye njikwa toro nke ukwuu, ọ dị nwute na otu ihe ahụ na-eme m, enwere m Celeron nwere afọ 5, 1.5 Gb, na enweghị m ike (nke ọma) na Unity 3d ma ọ bụ Gnome Shell, ha na-anwa i toomi Mac na ha ọ na-aga na-ezighi ezi, ebe ọ bụ na ha erughị ọbụna nkwonkwo ụkwụ. Ha na-agbadata ntakịrị site na nkà ihe ọmụma Linux. Oge mara mma oge ndị anyị nwere ụlọ siri ike, nke siri ike, nke a na-emezi na os na betas ndị a abụghị nsogbu. Enweghị onye ọrụ Micro $ oft ga-aga na nke a, ọ dị ka ọ naghị adịrị m n'uche. Dị n'otu, oké mgbanwe ... biko, ọ bụ ụgbọ mmiri na-adịghị mma.
Zaghachi Hernan Czarniecki
O bu 2011, onwa abuo site na afo ohuru, Linux na gnome2 anyi adighi ere ya nye guy with more vibes.
Ka anyị tụnyere Mac a ikpeazụ na OS ya, otu ya na Win8 na metro ya, yana Ubuntu nwere gnome2 ???, gbanwere oge.
Site mgbe ahụ gaa n'ihu ị nwere ike ịmasị Gnome-sheel ma ọ bụ Unity ma ọ bụ KDE ọzọ, nke na-aga na uto onye na-eri ya, ugbu a ọ dị ka Win95 .. mmmm, ọ naghị adị ka m
Shupacabras, ị na-eme ka m chee na ị bụ onye ọzọ nke m !!!!, m si WIN 286, 386 3.0 ETC, m na-eme ka ọ dị mfe, m wụnye 11.10 na nwunye m bụ onye si pc SO wdg adịghị aghọta ihe ọ bụla, ọ hụrụ udo nke ịdị n'otu n'anya n'osisi na-apụta ………….
O doro anya na ọ gaghị ekwe omume, ana m enye ya igwe na XP ma ọ họọrọ nke nwere 11.10
ehh ... Amaghị m otú m ga-esi kọwaa onwe m, ọ dị nwute na agbanweela m Unity ngwa ngwa ma maka ikpe m ọ dị mkpa, mana echere m na maka ndị na-enweghị ike imeghari na ha nwere ike iji ọnọdụ kpochapụwo na gnome3 desktọọpụ mmetụta.
Enweghị m 7 afọ nke Windows, na m na m kemgbe 1995, a di na nwunye nke afọ gara aga m kpamkpam kwagara Linux na ọ na-adị m mgbe niile na m na-ekwu na m na-enweghị mmasị na ya eserese interface.
Taa, a bụm onye ọrụ na-ekwenye ekwenye, yana 11.10 naanị ihe m mere bụ itinye ntọala desktọọpụ oroma
Amaghị m na ndetu, m na pentium4 na 1gb ebule na intel zuru oke Unity 2d na-arụ ọrụ, yana na amd x2 na nforce 630a vidiyo nke 3d na-efe efe, na mbụ ọ belata, onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ọdachi, mgbe ahụ m - kpochapụrụ nhazi niile ahụ ochie, folda ndị na - amalite na oge na folda onye ọrụ m ma ebe ahụ amalitere m ịrụ ọrụ zuru oke,
n'ikpeazụ m wụnye ubuntu na naanị ihe m mere bụ ịgbanwe akwụkwọ ahụaja maka oroma ahụ (ma wụnye ngwa m na-eji doro anya)
I user I am a Dabara user
Na na ị dị ezigbo mma, uru (ikekwe) bụ na enwere ezigbo ndị ọzọ dị ka MATE na-arụ ọrụ na gnome3, n'ezie enwere nkuzi maka arch na otu esi esi wụnye ya ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala ọ bụ ntuziaka ntụzịaka: S https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=121162
Ebe kachasị mma!
O yiri ka anyị bụ ọkara na ọkara 😀
You kụrụ ntu ahụ n’isi, maka m ụzọ kachasị mma iji gbasaa Linux bụ site n’ire na idozi igwe na ịwụnye Linux ma ọ bụ Mandriva, OpenSuse (nke na-arụ ọrụ nke ọma) na Ubuntu, otu n’ime uru ya bụ na ọ dị otu ihe ma metụ ya aka. ọ dị ntakịrị (ma ọ bụrụ na m dere ya dị ka nke ahụ na nzube)
Oge gbanwere mana ọ bụkwa eziokwu na maka mmelite ndị a ka mma akụrụngwa dị mkpa, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka igwe site na 4 afọ gara aga, XP na Gnome 2 ga-adị mma.
Ihe dịka m chọrọ ịgụ, nke bụ eziokwu bụ na ọ dị nwayọ nwayọ maka m amatala ụzọ m ga-esi laghachi na 10.04, mana ọ dị m ka ọ ga-abụrịrị ihe dị njọ, m gbakwunye 2gb ebule, anyị ga-ahụ ma ọ ga-aka mma, ma ebum n’uche m bụ ịnwa inweta akwụkwọ ndetu dị n’etiti, n’ihe ị gwara m, nia palos na 11.10/XNUMX?
Enweghi m ike ide Arch nkuzi ebe a, ikekwe ha ga enyere gi aka.
Otu n'ime ọdịda nke Ubuntu bụ kpọmkwem na ị na-ekwu, ọ na-eri ọtụtụ akụ
Ọ naghị ezigara m ozi nkebi nke ọ bụla
Laptọọpụ m dị n'etiti site na 3 afọ gara aga na KDE SC 4.7.2 na Kubuntu 11.10 na-arụ ọrụ zuru oke, lelee na ị na-eji ndị ọkwọ ụgbọala vidiyo ziri ezi 🙂
Ezigbo enyi ma ọ bụ nwunye. N'aka nke ọzọ ịgwa gị na ọ masịrị m etu ị si agba Blog ahụ, ekele si Spain enyi.
Mgbe m tinyere iwu na ọdụ m ga-enweta ihe ndị a
OpenGL na-enye eriri: GeForce Go 7300 / PCI / SSE2
OpenGL ụdị eriri: 2.1.2 NVIDIA 285.05.09
Naanị m na-enweta ihe na-adịghị mma «blacklisted», ọ ga-ekwe omume idozi ya….
Mgbe ahụ ị ga-enwe ike iji ịdị n'otu 2d. 🙁
Ezigbo ihe! Agatụbeghị m eche banyere ya otu a ...
m chọrọ igwu epic eventura
Kedu otu i si budata ịdị n'otu dị ka ọ dị maka windo ma ọ bụ nke pụrụ iche na iwu m jidere ya na 13.10 ma ọ bụrụ na ọ gbara ọsọ enwere m ee
Ego ole ka Unity na-akwado ??? (GB)
16 Arch Linux na akwụkwọ ahụ aja
Ntuziaka nwụnye maka kaadị NVidia na LMDE